တစ်ရက်ကို လေးညှင်းပွင့် ၂ ပွင့် စားရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ
HomeKnowledgeတစ်ရက်ကို လေးညှင်းပွင့် ၂ ပွင့် စားရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လေးညှင်းပွင့် မျိုးစိတ်ပေါင်း များစွာရှိပါတယ်။ လေးညှင့်ပွင့်ကို အစားအစာတွေထဲ ထည့်ရင် ဟင်းကို အရသာ ရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေးညှင့်ပွင့်ကို ဆေးဝါးတွေမှာလည်း ထည့်သုံးပါတယ်။ တစ်နေ့ကို လေးညှင်းပွင့် နှစ်ပွင့်စားရင် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရမှာပါ။
1. ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းစေပါတယ်။
လေးညှင်းပွင့်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးဖြူဥ ဆဲလ်တွေကို တိုးလာစေလို့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါ တွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ လေးညှင့်ပွင့်မှာ ဗီတာမင်စီလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
2. အစာချေမှုကို တိုးတက်စေပါတယ်။
အစာချေစနစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေမှာ လေးညှင်းပွင့် ပါဝင်ပါတယ်။ လေးညှင့်ပွင့်က အစာချေ အင်ဇိုင်းအရည် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးလာစေပါတယ်။ ဗိုက်မအီမသာလည်း မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။ လေးညှင်းပွင့်မှာ အမျှင်ဓာတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် အစာချေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပြီးသားပါပဲ။ အစာချေမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် လေးညှင်းပွင့်ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ပျားရည်နဲ့ သောက်ပေးလို့ ရပါတယ်။
3. သွားကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
သွားကိုက်ပြီဆိုရင် လေးညှင်းပွင့်ကို အရင် သတိရလိုက်ပါ။ သွားကိုက်တဲ့နေရာမှာ လေးညှင်းပွင့်ကို ငုံထားလို့ရပါတယ်။
4. အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
အသည်းက ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ လေးညှင်းပွင့်က အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်စေပါတယ်။
5. ခန္ဓာကိုယ်ထဲက နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
လေးညှင်းပွင့်ကို ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ လေးညှင်းပွင့်ကို ဆား၊ နွားနို့နဲ့ရောသောက်ရင် ခေါင်းကိုက် သက်သာပါတယ်။ လေးညှင်းပွင့်ကို အုန်းဆီထဲမှာ နှစ်ပြီး နားထင်ကို နှိပ်နယ်ပေးရင်လည်း ခေါင်းကိုက် သက်သာပါတယ်။.
6. အရိုးနဲ့ အဆစ်အမြစ်တွေအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။
လေးညှင်းပွင့်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက အရိုးသိပ်သည်းဆကို မြင့်တင်ပေးပြီး အရိုးတွေဆီကို သတ္ထုဓာတ်တွေ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
7. လေးညှင်းပွင့်မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်။
ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ဆေးဝါးတွေမှာ လေးညှင်းပွင့်၊ လက်ဖက်ဆီ၊ ပင်စိမ်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းဆေးတွေက သွားကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေပြီး သုံးပြီး 21 ရက်အကြာမှာ ခံတွင်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေကို လျှော့ချပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။
8. လေးညှင်းပွင့်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်အပြည့် ပါဝင်ပါတယ်။
လေးညှင်းပွင့်က ကိုလက်စထရောနဲ့ သွေးဖိအားတွေကို လျော့စေပြီး သွေးလွှတ်ကြောတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ အသက်လည်း ရှည်စေပါသေးတယ်။
9. သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါလိုမျိုး သွေးတွင်း သကြားဓာတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿာနာရှိသူတွေအတွက် လေးညှင်းပွင့်က သင့်တော်ပါတယ်။ လေးညှင့်ပွင့်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အင်ဆူလင်ရဲ့ တာဝန်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။လေးညှင်းပွင့်က သွေးထဲက ပိုနေတဲ့ သကြားဓာတ်တွေကို ဆဲလ်တွေဆီ ပို့ပေးလို့ သွေးတွင်းမှာ သကြားဓာတ်ညီမျှသွားမှာပါ။
10. သွေးခဲမှုအရှိန်ကို နှေးသွားစေပါတယ်။
လေးညှင်းပွင့်က သွေးခဲမှုအရှိန်ကို အလွန်နှေးသွားစေတာကြောင့် လေးညှင်းပွင့်မစားခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။